Uwutyala njani umfanekiso kwisangqa: Iinkqubo zokufundisa kunye nokunqampuna | Creatives Online
Ngokufika kweenkqubo ezintsha kunye nesoftware, kunokwenzeka ukwenza inani elingapheliyo lamaqhinga alula anokuthi adityaniswe kwaye abe luncedo kwiiprojekthi zethu. Ukusuka ekuhleleni imifanekiso ukuya ekuyiphatheni ngendlela yokuba senze ubuchule bethu bokuyila into engakholelekiyo.
Kungenxa yoko le nto kule post, siza kukunika isifundo esifutshane, malunga nokusika umfanekiso ngendlela ejikelezayo. Yintoni egqithisile, Siza kukubonisa izixhobo ezininzi zasimahla ezinokusetyenziselwa umthambo esiwucebisayo namhlanje. Kulula kakhulu, kufuneka nje ulungele iPC yakho kunye nenkqubo esiza kuyibonisa ngokulandelayo.
1 Nciphisa umfanekiso okwimo esetyhula
1.1 Yongeza umfanekiso
1.2 Phinda ubungakanani bobumo
1.3 Faka umfanekiso kwimilo
2 Iinkqubo zokucutha umfanekiso
2.2 I-Photoshop Express
2.5 Umhleli wePixlr
Nciphisa umfanekiso okwimo esetyhula
Ukuqala esi sifundo silandelayo, kuya kufuneka uvule inkqubo yeMicrosoft Word kwaye emva koko:
Yiya ku Faka ukhetho > ucinga ukongeza umfanekiso kwifayile yeOfisi (efana noxwebhu lweWord, intetho yePowerPoint, okanye ifayile yomyalezo we-imeyile ye-Outlook).
Cofa emfanekisweniUnokwenza imifanekiso emininzi ngexesha elinye, kodwa kufuneka uyenze ngokwemilo efanayo. Kodwa kwiLizwi, intsonkothe ​​ngakumbi njengoko awukwazi ukukhetha imifanekiso emininzi enokhetho olungagqibekanga okanye olungaphakathi kunye ne-disicatshulwa soyilo.
Emva koko cofa Izixhobo zokulinganisa > Ifomuato, kwaye kwiqela lobungakanani, cofa umhla phantsi Nqampuna.
Kwimenyu evelayo, cofa Sika ngobume kwaye emva koko ucofe imilo ofuna ukunqamla kuyo. Ubume busetyenziswe ngokukhawuleza kumfanekiso.
Emva koko sebenzisa iNqampu ukhetho > Fit okanye Nciphisa >Gcwalisa ukutshintsha ubungakanani bomfanekiso ongena ngaphakathi kobume obuwufakileyo:
Stuffed: Gcwalisa yonke imilo ngomfanekiso. Eminye imiphetho yangaphandle yomfanekiso inokusikwa. Akuyi kubakho sithuba esingenanto kwimida yesheyiphu.
Lungisa: Yenza wonke umfanekiso ulingane ngaphakathi kwimilo ngelixa ugcina umlinganiso wokuqala womfanekiso. Kusenokubakho isithuba esingenanto kwimida yesheyiphu. Iziphatho zezityalo ezimnyama zivela emaphethelweni nakwiikona zomfanekiso xa ukhetha iFit okanye Gcwalisa ukhetho.
Ungahlengahlengisa indawo yomfanekiso ngaphakathi kwesakhelo ngokukhetha umfanekiso kwaye uwutsale naphi na apho ufuna khona. Umzekelo, oku kunokukunceda ukuba ubeke eyona ndawo ibalulekileyo yomfanekiso ngaphakathi kobume obufakileyo kumfanekiso.
Kwindawo yokugqibela, ucheba imida yomfanekiso erhuqa umqheba wokusika omnyama.
Nje ukuba siyile imilo, kuya kuba yimfuneko ukongeza umfanekiso kwaye uwufake, kule nto:
Yongeza imilo kuxwebhu lwakho, emva koko ucofe imilo ukuyikhetha.
Cofa ku Izixhobo zokuzoba > Ifomathi, kunye neqela leZimbo zokuBumba, cofa Gcwalisa iSimbo> Umfanekiso.
Khetha uhlobo lomfanekiso ofuna ukuwusebenzisa njengo Ukusuka kwifayile o Imifanekiso ekwi-Intanethi kwaye emva koko uye kumfanekiso owufunayo kwaye uwufake.
Phinda ubungakanani bobumo
Umthombo: GFC Global
Ukutshintsha imilinganiselo yemilo egcwalisiweyo ngelixa ugcina ifomathi yayo esisiseko, yikhethe kwaye utsale naziphi na iziphatho zokulinganisa.
Faka umfanekiso kwimilo
Ukuba umfanekiso ugobile, unqunyulwe, okanye awugcwalisi imilo ngendlela ofuna ngayo, sebenzisa iFit kwaye Gcwalisa izixhobo kwiNqanaba yemenyu ukuyilungelelanisa.
Cofa kwimilo eyenziwe ngokuGcwalisa iSimo> Umfanekiso.
Cofa kwiZixhobo zeMifanekiso> UkuFomatha, kwaye kwiqela lobungakanani, cofa utolo phantsi koNqampu. kwaye ke imenu eneendlela zokunqampuna iya kuboniswa.
Khetha Lungisa ukuba ufuna ukuba umfanekiso uphelele ulungele imilo; Umyinge wembonakalo yomfanekiso wokuqala uya kugcinwa, kodwa indawo engenanto inokudalwa ngaphakathi komfanekiso.
Khetha Gcwalisa ukwenza imilo ifaneleke ngaphakathi kwemida yomfanekiso kwaye unqumle nantoni na ngaphandle komfanekiso.
Cofa u-Gcwalisa okanye Fit.
Gcwalisa Iseta ubungakanani bomfanekiso ukuhambelana nobude okanye ububanzi bemilo, nokuba yeyiphi enkulu. Esi senzo sizalisa imilo ngomfanekiso kwaye sisusa nantoni na engaphandle komjikelezo wemilo.
Lungisa Iseta ubungakanani bomfanekiso ukwenzela ukuba ubude kunye nobubanzi bomfanekiso buhambelane nemida yobume. Oku kusonga umfanekiso kangangoko kunokwenzeka ngaphakathi kwimilo, kodwa ezinye iindawo zokumila zinokushiywa zingenanto.
Iinkqubo zokucutha umfanekiso
Isicelo somthombo ovulekileyo weKrita, alungele onke amaqonga, Sisiphumo senkqubo yophuhliso yonyaka omnye eyaqala ngo-1998 kunye nomnqweno wokudala enye into esiyazi njenge-GIMP, esekwe kwithala leencwadi le-Qt. Ngezizathu ezohlukeneyo, iprojekthi yoqobo yayekwa kwaye endaweni yoko inkqubo entsha yokuhlela ifoto yaphuhliswa de uguqulelo lokuqala lweKrita lwavela ekugqibeleni kwimarike ngo-2004 njengenxalenye ebalulekileyo yesoftware ye-ofisi ye-KOffice.
Kwiminyaka yakutshanje, umphuhlisi wayo ugxininise kwizixhobo zokudweba kunye iguqule inkqubo yaba sesona sisombululo sivulekileyo sabadwebi bekhathuni, abazobi kunye namagcisa anengqondo. ngaphandle kokulahlekelwa yinkangeleko yokuhlelwa komfanekiso oqhelekileyo.
Siyazi iPhotoshop kwaye sinxulumana nayo iinkqubo okanye izicelo zokuhlela iifoto kunye nabo basebenzisi bajoliswe kwicandelo loyilo lwegraphic. Olu khetho lucacileyo lolweengcali kwaye, nangona kunjalo, ixabiso eliphezulu kakhulu, yiyo loo nto abantu abaninzi abathanda ukufota kunye noyilo lwegraphic bekhetha ukubhenela kwezinye iindlela ezifikelelekayo.
Ngomhleli we-Express, i-Adobe ibonelele ngenkqubo yokuhlela ifoto yasimahla njengesicelo sewebhu esekwe kwiFlash iminyaka ethile ngoku, kungoko inokusetyenziswa kuphela ukuba ufake iFlash Player. Ukongeza, esi sicelo sasimahla sokuhlela ifoto sifanelekile iOS, Android kunye neFowuni yeWindows kwaye inokukhutshelwa kwiivenkile ezihambelanayo zeapp.
Ukusukela ngo-2010, inkqubo yokuhlela ifoto kaGábor Horvàth's RawTherapee iphantsi kwelayisensi ye-GNU GPL. Le app yokuhlela ifoto ayisimahla nje kuphela, kodwa ikwangumthombo ovulekileyo, ukuze isetyenziswe kwaye iguqulwe ngaphandle kwezithintelo. Isicelo sinenguqu eyakhelwe-ngaphakathi ye-software yokuguqula i-dcraw, evumela ukuba ungenise kwaye uhlele imifanekiso eneedatha eziphambili (ebizwa ngokuba yi-RAW data) kwiikhamera zedijithali.
Ngale nto, esi sixhobo sijolise ikakhulu kubafoti abachwepheshile nabangabasafundanga abafuna ukufumana okuninzi kwiifoto zabo. I-RawTherapee ikwaxhasa i-JPEG, i-PNG, okanye i-TIFF, ngoko abasebenzisi bakho banokusebenza ngezi fomati zemifanekiso ngokunjalo.
Ngo-1998 kwavela uhlelo lokuqala olusemthethweni lwe-GNU (INkqubo yokuGqwetha imifanekiso), eyaziwa ngcono njenge-GIMP. Namhlanje ayinakuphikiswa ukuba isoftware ephuhliswe nguPeter Mattis kunye noSpencer Kimball yenye yezona nkqubo zivulekileyo zokuhlela ifoto kwihlabathi.
Isekelwe kwiThala leencwadi leGeneric Graphics (GEGL). I-GIMP iye yaba sisisombululo sokumisa esinye sokwenza umfanekiso kunye nokuhlelwa kumthunzi weenkqubo ezihlawulweyo. Ekuqaleni yenzelwe i-GNU / Linux, inkqubo ikwasebenza nazo zonke iinkqubo zeWindows kunye ne-macOS.
UAnderson upapasha inkqubo yokuhlela umfanekiso wePixlr esekwe kwilifu kwi2008. Namhlanje usebenza ne-Autodesk kwaye upapashe iinguqulelo zeselula zenkqubo yakhe ukuhlela iifoto ze-iOs kunye ne-Android, phakathi kwabanye. Usetyenziso lwewebhu lunokusetyenziswa simahla kuzo zonke iibhrawuza ngaphandle kwesidingo sokubhalisa, nangona kunjalo, ukuba i-Adobe Flash Player ifakiwe, njengoko inkqubo inezinto ezahlukeneyo zeFlash. I-Pixlr Express yinguqulelo ekhaphukhaphu yokwenza umfanekiso osezantsi.
Yaqala njengeprojekthi encinci yabafundi kwiYunivesithi yaseWashington State, I-Paint.NET yenye yezona nkqubo zilungileyo zokuhlela ifoto kwindawo ye-freeware. Emva kokukhululwa ngo-2004 phantsi kwelayisenisi ye-MIT yasimahla, okwangoku ithengiswa phantsi kwelayisensi yobunini. Ulwakhiwo olusisiseko lwesicelo yiMicrosoft .NET framework, iqukwe ngokuzenzekelayo kufakelo. Ekubeni isakhelo sisebenza kunye neWindows, i-Paint.NET ayifumaneki kwamanye amaqonga.
Yiyiphi enye indlela yenkqubo elula ye-Microsoft Paint esoloko iphuhliswa kwiminyaka yakutshanje, ngoko ke ifanelekile kwimisebenzi ephezulu. A) Ewe, Akunakwenzeka kuphela ukusebenza kunye neengqimba ezininzi, kodwa kunye nokuqhuba iiprojekthi ezininzi ngokufanayo evula kwiithebhu ezahlukeneyo.
Ukunqamla umfanekiso kunye nokuwufaka yenye yezona ndlela zilula zokuziqhelanisa, kwaye ukuba uneenkqubo ezifana ne-Word kunye nezo sizicebisile, ukuphuhliswa kwezilandelayo akuyi kuba yingxaki kuwe.
Yiyo loo nto sikumema ukuba uzame ezinye zezixhobo esizikhankanyileyo kwaye uye kwi-adventure.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokunciphisa umfanekiso kwisangqa